သမိုင်းနှင့် သမိုင်း | ပျူနိုင်ငံ
သမိုင်းမှတ်တမ်းများကို ရေးသားရာတွင် “ညာ” ၍သော်
လည်းကောင်း၊ “ညှာ” ၍သော် လည်းကောင်း၊ “ကြွား” ၍သော်
လည်းကောင်း မရေးသား ကြရန် ကွယ်လွန်သူ သမိုင်းပညာရှင်
ဆရာကြီး ဒေါက်တာ သန်းထွန်းက မှာကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။
ကျဆုံးလေသူ လွတ်လပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း ပြီးပြည့်စုံသော စာအုပ် ဟူ၍
ယနေ့အချိန်အထိ တစ်အုပ်မှ မရှိခြင်းသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာ
နိုင်ငံ၏ သမိုင်းစာမျက်နှာများအနက် မှတ်တမ်းတင်မှု ဆိုးဝါးညံ့ဖျင်း
မှုကို မီးမောင်းထိုးပြလျက် ရှိပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ကိုယ်ရံတော်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်
ဖူးသော ကွယ်လွန်သူ ဗိုလ်ထွန်းလှ (ခ) စာရေးဆရာ တက္ကသိုလ်
နေ၀င်း ရေးသားသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ပက်သက်သည့်
စာအုပ်များတွေမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဒေါ်ခင်ကြည်တို့တွင်
သားသမီး လေးဦး ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ ရေနစ်ပြီး သေဆုံးခဲ့သော
အောင်ဆန်းလင်း အပြင် မွေးဖွားခါစ ရက်ပိုင်းအတွင်း သေဆုံးခဲ့
သော ကလေးငယ် တစ်ဦး ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်လောက်က အင်တာနက်
စာမျက်နှာ တစ်ခုပေါ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကျဆုံးချိန်အထိ
အောင်ဆန်းလင်း မကွယ်လွန်သေးဘူးလို့ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
အဲဒီလို ရေးသားခြင်းဟာ သမိုင်း မှတ်တမ်းတွေ ဘယ်လောက်
တောင် အန္တရာယ် ကျရောက်နေပါသလဲ ….။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး သူ အသက်ရှင်နေထိုင်
ခဲ့တဲ့ နေ့စွဲအလိုက် ဖြစ်စေ၊ အပတ်စဉ်လိုက် ဖြစ်စေ၊ လ’အလိုက်
ဖြစ်စေ မှတ်တမ်း တင်နိုင်မှု၊ မှတ်တမ်း တင်ထားမှုဟာ အားရဖွယ်
မရှိပါဘူး။ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား သမဂ္ဂ၊ ဗ.က.သ
ခေါင်းဆောင်ဘ၀ အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတွေ လိုအပ်ပါတယ်။
အဲဒီကနေ တို့ဗမာအစည်းအရုံးထဲကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
ရောက်သွားပါတယ်။ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်ဟောင်း
သခင်အောင်ဆန်းသည် တို့ဗမာအစည်းအရုံး၏ ဒုတိယ မျိုးဆက်
လား တတိယ မျိုးဆက်လား … တို့ဗမာ အစည်းအရုံး အကွဲအပြဲ
နောက်ပိုင်းမှာ ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ မျိုးဆက်လား …. ယနေ့အထိ
သမိုင်းမှတ်တမ်းများက အဖြေ မပေးသေးပါ။
သမိုင်း မှတ်တမ်းတွေ စီးဆင်းခဲ့တဲ့ ကာလမှာ လူဦးရေ၊ ပညာ
တတ်မြောက်မှု ရာခိုင်နှုန်း၊ မြို့ပေါ်နေ လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဥပမာ …
၁၉၃၀ ခုနှစ် ကုလား- ဗမာ အဓိကရုဏ်းကာလ ရန်ကုန်မြို့
မှာ ဗမာနဲ့ တိုင်းရင်းသား အရေအတွက်ဟာ အနည်းစု ဆိုတဲ့
သမိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု မှတ်တမ်းတွေ ပါ လိုအပ်
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံး တိုင်းတပါး သြဇာအာဏာ
အောက်ကနေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တို့ဗမာအစည်းအရုံး
က ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့အတူ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးကို
ဆင်နွဲဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ နာမည်ကျော် ရဲဘော်သုံးကျိပ်
ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ သမိုင်းပါ။ မှတ်တမ်း တော်တော်များများမှာ
ကွဲနေတဲ့ တို့ဗမာအစည်းအရုံး နှစ်အုပ်စုက လူငယ်တွေ ပါဝင်
ကြတယ်ပဲ ရေးကြပါတယ်။ ဗမာ့ ထွက်ရပ်ဂိုဏ်းရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ၊
ဒေါက်တာ ဘမော်အဖွဲ့မှ လူငယ်တချို့တောင် လွတ်ဖို့ အစီ
အစဉ်တွေ လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုသော မှတ်တမ်းများဟာ တဖြေးဖြေး
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်တဲ့ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်
(B.I.A) က သထုံခရိုင်၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ သဲဖြူကုန်းက ရွာသူကြီးကို
သေဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ တစ်ခုအနေ
နဲ့ နောင်အခါမှာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် သခင်ထွန်းအုပ်က ဗိုလ်ချုပ်
အောင်ဆန်းကို လူသတ်မှုနဲ့ တရားစွဲဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ
မှတ်တမ်းကို သမိုင်းဆရာတွေ သမိုင်းရေးတဲ့အခါ ခုန်ပျံကျော်လွှား
ပြီး ရေးသားလေ့ ရှိပါတယ်။
အလားတူ ၁၉၄၅ ခုနှစ် အတွင်း ဂျပန်တော်လှန်ရေးအတွက်
လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတွင် မတော်တဆ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်
ပွားခဲ့ပါတယ်။ သခင်တင်မြ အင်္ကျီအိတ်အတွင်းမှာ ပြုတ်ကျခဲ့
သော သေနတ်ဟာ ကျည်ဆံထွက်သွားပြီး အစည်းအဝေးပွဲ
ရောက်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတစ်ယောက် အသက်
အန္တရာယ်မှ သီသီလေး လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ အလားတူ
ဂျပန်ဆန့်ကျင်ရေး ခရီးစဉ်တစ်ခု၌ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရေနစ်ခဲ့ဖူးကြောင်း တိုးတက်ရေး
သခင်အုန်းမြင့်၏ မှတ်တမ်းများထဲတွင် ဖတ်ရူရပါတယ်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပြီးကာလ ဖ.ဆ.ပ.လ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ဖ.ဆ.ပ.လ အဖွဲ့က
ထုတ်ပယ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ပါ။ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းကို
တော်တော် ရိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ ယနေ့အထိလည်း
သမိုင်းမှတ်တမ်းသမားတွေ ရူဒေါင့်မျိုးစုံကနေ အယူအဆ မျိုးစုံ
နဲ့ ရေးနေကြဆဲပါ။ အဲဒီခေတ်က ရန်ကုန် အတွင်းဝန်ရုံးကို ဆန္ဒ
ပြခဲ့တဲ့ အလံနီ ကွန်မြူနစ်တွေက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို မြန်မာ
ပြည်ရဲ့ ချန်ကေရှိတ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့ဖူးပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာ၊ အမျိုးသား
ခေါင်းဆောင်ကြီး၊ အရှေ့တောင်အရှ ဒေသအတွင်း ထင်ရှားခဲ့
သော လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း
ရေးရာများ၌ ထာဝရ မှတ်တမ်းဝင်နေဆဲ မြန်မာပြည် ခေါင်းဆောင်၊
ဦးအောင်ဆန်း ခေါ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတွက် ယနေ့အချိန်
အထိ ပြီးပြည့်စုံသော တစ်ခုတည်းသော သမိုင်းမှတ်တမ်း မရှိ
သေးပါ။ သူ ကျဆုံးခဲ့တာ (၆၃) နှစ် ပြည့်ပါတော့မယ်၊ သူ မွေးဖွား
ခဲ့တာ သက္ကရာဇ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဆိုရင် နှစ် (၁၀၀) ပြည့်မြောက်
ရာဇ၀င်ထဲက သံပုံချိုင့် ….
လာမည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁၉)ရက်နေ့ဆိုရင် ပြည်ထောင်စု
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာဇာနည်နေ့သည် (၆၃) ကြိမ်ပင် တိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ရန်ကုန်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ အာဇာနည်ကုန်းကို လွန်ခဲ့သော (၆၃)နှစ်
ခန့်က သံပုံချိုင့်ဟု ခေါ်တွင်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဦးဆောင်
ကြိုးပမ်းသူ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
အပါအ၀င် ထိပ်တန်းနိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း
ခံရသော အခါ ယင်းတို့၏ ကျန်ရစ်သော ခန္ဓာကိုယ်များအား
ဂူသွင်း မြုပ်နှံရန် နေရာရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုအခါ ရွှေတိဂုံစေတီ
၏ မြောက်ဘက်အရပ်၌ ရှိသော “သံပုံချိုင့်” ခေါ် ဆင်းရဲသား
များ စုပြုံနေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်တစ်ခုကို အာဏာပိုင်များက
ယင်း သံပုံချိုင့် ရပ်ကွက်အတွင်း နေထိုင်သော ဆင်းရဲသားများ
အား ကွယ်လွန်သူ ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင် အထိမ်းအမှတ်
ဖြစ်သည့် ဗဟန်းမြို့နယ် ဦးချစ်မောင်လမ်းပေါ်တွင် ပြန်လည်
နေရာပေးရန် စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်အခေါ် ဗဟန်းမြို့နယ်
ဆရာစံတောင်၊ အရှေ့မြောက်နှင့် အနောက်မြောက် ရပ်ကွက်တို့
သည် ယခင် သံပုံချိုင့်မှ ပြောင်းရွေ့ခဲ့သော ဂွတ္တလစ် (၃)ရပ်ကွက်
Posted by ကိုအောင် at 15:45
ဗဟုသုတရတယ်ဗျာ.. ကိုအောင်ရေ.... ကျွန်တော်လည်း ဒီအကြောင်းတွေကို ဒီ့ထက်ပိုလေ့လာဖို့ လိုလာပြီ...
အရင်က မကြားဖူးတာလေးတွေကို ဖတ်မှတ် သွားပါတယ်။
2008 အာဇာနည် နေ့တုန်းက ၇န်ကုန်ရောက်တုန်း ရန်ကုန်က ဘလော့ဂါတချို့နဲ့ အာဇာနည် ကုန်းမှာ အလေးသွားပြုဖူးတယ် စစ်လား နှိုက်လားတွေများပြီး အာဇာနည်ကုန်းပေါ်မှာ ရေ၀ပ်နေတာ အဖြစ်သာလုပ်ထားတဲ့ ပန်းခွေတွေ တွေ့ရတာ စိတ်မချမ်းးသာစရာပါ အဲ့အကြောင်း စာရေးဖူးသေးတယ် ခုတော့ ပျက်သွားပြီး အလေးပြုတဲ့ပုံကိုတော့ ဒီမှာ ကြည့်လို့ရတယ် ။
ဘာညာ ။ ကိုဂေါက် ။ ဖိုးသူတော် ။ စိုးဇေယျ ။ လွမ်းစေ ။ မောင်မျိုး ။
မြန်မာတွေဟာ ကိုယ့်သမိုင်းကို ကိုယ် မလေးစားသလို ၊ သူများ သမိုင်းကိုလည်း မလေးစားမိတတ်ကြဘူးဗျ။
ဘာလို့ ကျနော် ပြောတာလဲ ဆိုရင် “ လမ်းကြားသရဲ ” လိုမျိုးပေါ့။ ဘယ်က ကူးယူဖော်ပြတာပါ ဆိုသော Credit လေးတောင်မှ သူတို့ မထည့်ပေးနိုင်တာပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ သမိုင်းတွေပျောက်ပြီး ၊ သမိုင်းတွေ ရိုင်းလာခဲ့တာပါပဲ။
( ခုနက “ ဘုရင့်အိမ်သာ ” ပို့စ်ရေးရင်း save နဲ့ Publish မှာ နှိပ်လိုက်လို့ ကိုအောင်ရေ။ တကယ်တော့ ၂ ကြောင်းပဲ ပြီးသေးတယ်။ ဒါကြောင့်ပါ။ )
သံပုံချိုင့်လို့ခေါ်ပါတယ် အာဇာနည်ကုန်းမျက်နှာခြင်းဆိုင် ယခု မြောက်ဖက်မုဒ်အဆင်း လက်ဝဲဘက် စစ်အတွင်းက အပျက်အစီးတွေ ကားပျက်တွေ ပုံထားလို့ သံပုံချိုင့်လို့ ခေါ်တာပါ အာဇာနည်ကုန်းကတော့ သီးခြားနာမည်မရှိပါ ယခု အာဇာနည်ကုန်းနေရာမှာ အနာဂမ်ဆရာသက်ကြီးကို ဂူသွင်းသင်ဂြိုလ် ဘူးတယ်
အာဇာနည်ကုန်းမှာ ဦးရာဇတ်နဲ့ ရဲဘော်ကိုထွေး ရုပ်အလောင်းမရှိ ပါဘူး သူတို့ကို တာမွေသင်ချိုင်းမှာသင်ဂြိုလ်တယ်လို့ မှတ်သားဘူးတယ် မွတ်စလင်တွေဖြစ်လို့ နေ့ခြင်းသင်ဂြိုလ် လိုက်ပြီး အာဇာနည်ကုန်းမှာအထိမ်းအမှတ်သဘောမျိုးဘဲ ထားတယ်
ဟုတ်ကဲ့ ကိုကျော်၊ ကျနော် “သံမှိုချိုင့်” ကနေ
“သံပုံချိုင့်”လို့ ပြင်လိုက်ပါပြီ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကြားဖူးပါတယ်၊ သိပ်တော့ မသေချာပါ၊ အနာဂမ်
ဆရာသက်ကြီး အုတ်ဂူဟာ ကွယ်ပျောက်သွားတာ
လား၊ ရောထွေးနေဆဲလား သိပါ့ရစေ။
17 July 2010 at 19:59
ကိုအောင်ရေ..ဟစ်တိုင်မှာ တင်ဖို့ ပုံလာယူတာ
ယူလို့မရအောင် လုပ်ထားတာကိုးဗျ။အဲဒီနည်းလေး ဝေမျှစမ်းပါဦးဗျာ။
သမိုင်း ကိုပြင်ရုံလေး ဆိုရင်တော့ ခွင့်လွှတ်တယ် မဟုတ်လား
18 July 2010 at 04:36
မသိသေးတာတွေ သိရတော့ ပီတိဖြစ်တယ်ဗျာ။
18 July 2010 at 06:07
မှတ်တမ်းမှတ်ရာနဲ့ ပတ်သက်ရင် မြန်မာတွေ သိပ်အားနည်းတယ်။ မူကွဲတွေကလဲ များတယ်။ ပြီးတော့ ခေတ်အခြေအနေအလိုက် ဘက်လိုက်မှုတွေလဲရှိတယ်။
အမှန်နဲ့အမှား နောက်လူတွေက မခွဲခြားတတ်တော့ဘူး။
ရာဇ၀င်တိုင်းကို ယုံဖို့ရာ မ၀ံ့မရဲဘဲ။
အာဇာနည်ကုန်းနေရာကို တွက်ချက်ပြီး အဆိုတွေတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်၊ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်၊ ဗြိသိသျှခေတ် ကြောက်တဲ့သူကကြောက် ပုန်းတဲ့သူကပုန်း ပြေးတဲ့သူကပြေးနဲ့ ၊ ဗိုလ်ချုပ်တို့ အသုဘချခဲ့စင်က ဆိုတဲ့စာကို ဘယ်မှာဖတ်ဖူးသလဲစဉ်းစားနေတာ။
အမှန်က သူတို့ က သမိုင်းကို လိမ်ညာ ဖုံးကွယ်
ဘို့ကြိုးစားနေသူတွေပါ။ မမှန်တဲ့ သူတွေဖြစ်
ကြလို့ လဲ မှန်တဲ့ သူ တွေ ကို အတွင်းစိတ်က
မိုးတစမ့် စိမ့်နဲ့ဥသြ သံ အောက်မှာ ပဲ
တညီညာထဲ ညိမ်သက် အလေးပြု နေကြရတဲ့ 
ဓလေ့လေးတောင် ပျောက်သွားတာ
မျက်စေ့ရှေံတင်ပါပဲ။
စိန်ခြယ်ပန်းများဖြင့် အဖေ့ကို ပူဇော်ကြပါစို့
ကိုအောင်ရေ မသိသေးတာတွေ သိရပြီး တွေးစရာတွေလည်း အများကြီးရသွားပါတယ်။
စကားမစပ် World Cup နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Tag ထားတာကို မရေးဖြစ်ခဲ့တာ တောင်းပန်ပါတယ်နော့်။ အဲဒီတုန်းက ဘောလုံးပွဲ သိပ်ဝါသနာပါတဲ့ အမျိုးသားကို မေးပြီး ရေးမယ်လို့ ကြံထားတာ သူကလည်း ညဘက်အလုပ်လုပ်နေလို့ ဘောလုံးပွဲ မကြည့်ဖြစ်ခဲ့လို့ပါ။